Maxay itoobiya diidantahay iyo shirkii shalay ka dhacay Mbagathi.
May 15, 2003. Halalkenya.com
By : Yussuf Cali
Danjiraha dowladda Itoobiya C/ casiis Axmed Aadan ayaa ku dhawaaqay in ay kasoo horjeedaan guddiga Iswaafajinta Qoraalada “Harmonization committee” oo mar hore looga dhawaaqay Mbagathi kuwaas oo diyaariyay qaabka loo mideyn karo labada qoraal ee guddiga Axdiga iyo dastuurka.
waxaa uu beeniyay in ay fashilanayaan shirka oo uu ku tilmaamay been abuur aan sal iyo raad toona lahayn.
Dowladda Itoobiya ayaan u arkin dan guddigan la magacaabay ee qoraaladiisa soo gudbiyay uuna guddominaye u yahay Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar, waxayna u arkaan in arintani ay dan u tahay dalka Jabuuti
Dhinaca kale, danjiraha Jabuuti Ismaaciil Guulaal Boodane ayaa isna sheegay in guddiga Isku dubaridka qoraalada uu yahay mid sharci ah oo ay IGAD magacaawday.
waxaa shalay lasoo gabagabeeyay qaybtii ugu danbaysay ee shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed waxaana halkaasi kahadalay wasiirka arimaha dibadda kenya Musyoka oo sheegay in la is ixtiraamo soomaalida dhexdeeda si loo helo xal.
wasiirku wuxuu sheegay in shirka uu usocdo si wanaagsan oo lagu farxi karo isagoo uga mahadceliayay dalalka IGAD iyo beesha caalamka dhaqaalaha iyo aqoonta ay ku taageeraan shirka.
Warar Hore ee Kenya